Statement by Ambassador Kyaw Moe Tun at the 50th Plenary Meeting of the 76th UNGA
Statement by Ambassador Kyaw Moe Tun, Permanent Representative of the Republic of the Union of Myanmar at the 50th Plenary Meeting of the 76th United Nations General Assembly under Agenda Item 75 (a) to (c) : “Strengthening of the Coordination of Humanitarian and Disaster Relief Assistance of the United Nations, including Special Economic Assistance” on 10 December 2021
ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်းမှ (၇၆)ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ၊ ​(၅၀)ကြိမ်မြောက် မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေး၌ အထူးစီးပွားရေးကူညီပေးအပ်မှုအပါအဝင် ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကယ်ဆယ်ရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ အစည်းအဝေးတွင်
မြန်မာနိုင်ငံ၌​ ငြိမ်းချမ်းမှု၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနှင့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီ ရရှိရေးအတွက် နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းမှ ​မြန်မာပြည်သူများအား
(နယူးယောက်မြို့၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်)
၁။ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်းသည် ၁၀-၁၂-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် (၇၆) ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ၊ (၅၀) ကြိမ်မြောက် မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေး၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ကုလသမဂ္ဂ၏ အထူးစီးပွားရေးကူညီပေးအပ်မှုအပါအဝင် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကယ်ဆယ်ရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြှင့်တင်ရေး ဆိုင်ရာ အစည်းအဝေးတွင် မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။
၂။ သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်း၏ မိန့်ခွန်းတွင် အောက်ပါအဓိကအချက်များပါဝင်ပါသည်-
(က) ယခုနှစ်များအတွင်း ကပ်ရောဂါပြန့်ပွားမှု၊ ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားမှု၊ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့် သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် မကြာခဏ​ဖြစ်ပွားမှုတို့ကြောင့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီလိုအပ်မှုသည် ကမ္ဘာတစ်ဝန်း၌ ပိုမိုတိုးတက်လာသည်ကို တွေ့ရကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအနေနှင့် တိုးပွားလာသည့် ကမ္ဘာလုံး ဆိုင်ရာ လူသားချင်စာနာထောက်ထားမှု အကူအညီလိုအပ်မှုအပေါ် ကုလသမဂ္ဂ၏ တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို အားပေးထောက်ခံကြောင်း၊
(ခ) ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း အလှူရှင်များ၏ သဒ္ဓါတရားထက်သန်စွာဖြင့် လှူဒါန်းထောက်ပံ့ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၉.၁၁) ဘီလီယံ ရှိခဲ့သော်လည်း နေရပ်စွန့်ခွာမှု တိုးမြှင့်လာမှုအပြင် လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှု ရန်ပုံငွေကွာဟမှု ပိုမိုကြီးမားလာမှုတို့အပေါ် စိုးရိမ်မိကြောင်း၊ ကမ္ဘာ့နေရာအသီးသီး၌ အရေးပေါ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီလိုအပ်မှုသည် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများအကြား ပိုမိုနီးကပ်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်နေမှုကို သိသာထင်ရှားစေကြောင်း၊
(ဂ) ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့က တရားမဝင် စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုဖြင့် စစ်တပ်သည် လက်ရှိ၌ စီးပွားရေးနှင့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ လူသားဖန်တီးသည့် ဘေးဒုက္ခကြီးကို ဖြစ်ပွားစေခဲ့ပြီး၊ စစ်တပ်၏ အရပ်သားပြည်သူများအပေါ် ကျူးလွန်သည့် အကြမ်းဖက်မှုကြောင့် မြန်မာပြည်သူ (၁,၃၀၀) ကျော် အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်း၊
(ဃ) ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးများရုံး၏ မှတ်တမ်းအရ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းသည့် အချိန်မှ ဒီဇင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့အထိ ခန့်မှန်းခြေ ပြည်သူ (၂၈၄,၇၀၀) ဦး သည် နေရပ်စွန့်ခွာခဲ့ရကြောင်း၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မှ ယခုအချိန်အထိ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီလိုအပ်နေသူဦးရေသည် (၁) သန်းမှ (၃) သန်းအထိ မြင့်တက်လျက်ရှိကြောင်း၊ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုနှင့် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါကြောင့် မြန်မာပြည်သူဉီးရေတစ်ဝက်ခန့်နီးပါးသည် လာမည့်နှစ်အတွင်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအခြေအနေနှင့် ရင်ဆိုင်ရ မည်ဟု ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်မှ ခန့်မှန်းထားကြောင်း၊ ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာ အစီအစဉ်မှ လာမည့် (၆) လတာကာလအတွင်း မြန်မာပြည်သူ (၂.၆) သန်း သည် အစားအစာလိုအပ်ချက်ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြောင်း၊
(င) မြန်မာနိုင်ငံသည် ဆိုးဝါးသည့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုပြဿနာနှင့် ရင်ဆိုင်နေရပြီး၊ အရေးပေါ် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများ ပေးအပ်မှုတွင် စစ်တပ်မှ ပြင်းထန်သည့် ကန့်သတ်ချက်များချမှတ်ထားကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် မြန်မာစစ်တပ် အာဏာချုပ်ကိုင်ထားသရွေ့ လုံခြုံစိတ်ချ သည့် မည်သည့်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီမျှ ပေးအပ်နိုင်မည် မဟုတ်ကြောင်း၊ လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှု အကူအညီ လိုအပ်နေသူများထံ အကူအညီများ ရောက်ရှိရေးသည် အထူးအရေးကြီး သဖြင့် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးအပါအဝင် အခြားနည်းလမ်းများကို မိမိတို့အနေဖြင့် ရှာဖွေရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊
(စ) မြန်မာစစ်တပ်သည် များပြားသည့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုပြဿနာများနှင့် ပြည်သူများ ရင်ဆိုင်နေရသော်လည်း ဆိုးဝါးသည့် နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများနှင့် လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေများကို ချိုးဖောက်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုရက်သတ္တပတ်တစ်ပတ်အတွင်း တွင်ပင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၌​ လူငယ် (၅) ဦး အပါအဝင် ပြည်သူ (၁၁) ဦး ကို မီးရှို့သတ်ဖြတ်မှု၊ ရန်ကုန်မြို့၌ ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြနေသူများကို ကားဖြင့်တိုက်သတ်မှုတို့ကို ကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်း၊ အဓမ္မဖမ်းဆီး မှုအပြင် ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေး အဆောက်အအုံများ၊ ဝန်ထမ်းများနှင့် လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီ ပေးသူများကို ဖမ်းဆီးတိုက်ခိုက်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း၊
(ဆ) စစ်တပ်၏ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေအား အဆိုးဝါးဆုံးချိုးဖောက်နေမှုသည် အကူအညီလိုအပ်နေသူများအား အကူအညီပေးအပ်မှုကို တားဆီးမှုမပြုရန်ဟူသော ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေး ကောင်စီအပါအဝင် ကုလသမဂ္ဂမှ တောင်းဆိုချက်ကို လက်မခံခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ စစ်တပ်သည် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီပေးအပ်သူများနှင့် ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများကို တင်းကျပ်စွာ စိစစ်လျက်ရှိကြောင်း၊
(ဇ) မြန်မာနိုင်ငံသည် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီပေးအပ်ရာ၌ စိန်ခေါ်မှုရှိနေသည့် အခြေအနေဖြစ်ကြောင်း၊ သို့ရာတွင် ကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီများအနေနှင့် အထူးသဖြင့် ကမ္ဘာ့စားရပ်ရိက္ခာ အစီအစဉ်နှင့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုရေးရာ ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့တို့အနေနှင့် ကပ်ရောဂါတုံ့ပြန်မှု အပါအဝင် အခြားအကူအညီများပေးအပ်ရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုများအတွက် အသိအမှတ်ပြုကျေးဇူး တင်ကြောင်း၊
(ဈ) မြန်မာပြည်သူများသည် ယခုကဲ့သို့ များစွာခက်ခဲနေသည့်အချိန်တွင် ကုလသမဂ္ဂအပေါ် ယုံကြည် ဆဲဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၌ ငြိမ်းချမ်ရေးနှင့် တည်ငြိမ်မှုရရှိရေးနှင့် လိုအပ်သည့် လူသားချင်းစာနာ ထောက်ထားမှု အကူအညီများ အဟန့်အတားမရှိ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရေးတို့အတွက် စစ်တပ်အုပ်ချုပ်မှုကို အဆုံးသတ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလမ်းကြောင်းသို့ ပြန်လည် ရောက်ရှိရေးအတွက် နိုင်ငံတကာနှင့် ဒေသတွင်းနိုင်ငံများအား အမြန်ဆုံးတုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်ရန် ထပ်မံ တောင်းဆိုကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်း၏ အချိန်မီထိရောက်သော အရေးယူဆောင်ရွက်မှုမရှိပါက မြန်မာပြည်သူတစ်ရပ်လုံး၏ လုံခြုံရေးအတွက် ကြီးမားသည့်အန္တရာယ်ဖြစ်စေ၍​ နိုင်ငံအား ကြီးမားသည့် ပဋိပက္ခသို့ လုံးဝကျရောက်စေရန် တွန်းပို့နေကြောင်းကို ထပ်မံအလေးထားပြောကြားလိုကြောင်း၊
၃။ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် ပြောကြားခဲ့သည့် မိန့်ခွန်းအပြည့်အစုံ (အင်္ဂလိပ်ဘာသာ) အား ပူးတွဲဖော်ပြအပ်ပါသည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်၊
Statement by Ambassador Kyaw Moe Tun, Permanent Representative of the Republic of the Union of Myanmar at the 50th Plenary Meeting of the 76th United Nations General Assembly under Agenda Item 75 (a) to (c) : “Strengthening of the Coordination of Humanitarian and Disaster Relief Assistance of the United Nations, including Special Economic Assistance”
(New York, 10 December 2021)
First of all, I wish to thank the Secretary-General for his reports particularly for providing the General Assembly an overview of key trends in the areas of humanitarian assistance and recommendations to member states and humanitarian organizations. Over the past years, as we speak, the global humanitarian needs are significantly increasing due to the continued spread of COVID-19, conflicts, climate change, and frequent natural disasters. We support the important role of the United Nations in coordinating and responding to the growing global humanitarian needs.
Humanitarian assistance provided by the United Nations is one of the most tangible impacts of the existence of this Organization felt by millions of people on the ground around the world. However, we are particularly worried by the disturbing trends ranging from rising displacements to higher humanitarian funding gap despite unprecedented generosity of donors contributing USD 19.11 billion in 2020.
It has been clear that several ongoing humanitarian emergencies in different parts of the world reflect the need for closer coordination and cooperation between member states on humanitarian assistance. It has become more crucial to intensify our efforts to alleviate the suffering of millions around the world.
In February 2021, Myanmar military perpetrated an illegal coup against the democratically elected civilian government. This illegal act by the Military triggered the start of the current man-made economic and humanitarian catastrophe. Soon after the coup, the junta forces unleashed their campaign of terror upon the civilian population who resist their illegal military rule. The systematic and widespread atrocities being committed by the military junta has left more than 1,300 civilians dead. According to UNHCR, as of6December, an estimated 284,700 people have been internally displaced since the coup in addition to already existing 335,000 IDPs. The number of people in need of humanitarian assistance has increased from 1 million in 2020 to3million now. UNDP has estimated that nearly half of Myanmar population will be living under poverty line by next year due to the combined impacts of the military coup and COVID-19. WFP estimates 2.6 million people would require food assistance in the next six months. It is noted with worry that only 57 per cent of the total requirements under 2021 Myanmar Humanitarian Response Plans have been received so far.
Myanmar is facingaserious humanitarian crisis. This tragedy is happening before our very eyes. Access to vulnerable people who are in need of urgent humanitarian assistance and protection remains extremely limited by the military. There could be none whatsoever safe and unimpeded humanitarian access in the country if the military continues holding power. It is imperative that we all need to find ways including cross border assistance to ensure the humanitarian assistance reach to the people in need.
Despite this enormous humanitarian crisis, the military junta continues to commit grave violations of international human rights and humanitarian laws. In this week alone, the military has burnt to death 11 people including5minors in Sagaing and rammed vehicles into peaceful protesters in Yangon exercising their fundamental right to peaceful assembly. The junta forces have been attacking education and health-care facilities, personnel and aid workers who do not bow to their illegal rule. Arbitrary detentions continue. In the face of rising resistance from civil defense forces, the military turns to their usual tactic: to punish civilian populations including by wholesale burning of civilian houses and properties leaving an increasing number of civilians displaced, as demonstrated by recent events in Chin State.
One of the most serious violations of humanitarian law by the military is blocking humanitarian access to people in need of assistance in defiance of numerous calls by the United Nations including the Security Council. The military has been imposing severe scrutiny of humanitarian personnel and supplies. Bureaucratic procedures have been weaponized to control space and movement for humanitarian actors.
At this moment, Myanmar is ataunique situation when it comes to providing humanitarian assistance. Therefore, I wish to express my sincere thanks to United Nations agencies including World Food Program (WFP) and UN office for the coordination of humanitarian affairs (OCHA) for their best efforts in coordinating and providing humanitarian assistance as well as rapidly responding to COVID-19 pandemic. We will continue to support the efforts of the UN and the international community in responding to the global humanitarian needs.
In conclusion, Mr. President, we, people of Myanmar are still counting on the United Nations at this profound difficult time. To bring peace, stability and to provide humanitarian assistance to those in need is to start with the end of military rule. I appeal again for an urgent unified international and regional response to help put Myanmar back on the path to democracy. I wish to stress that lack of decisive timely action from the international community will push further the people of Myanmar at high risk for their safety and intoafull-blown conflict in Myanmar.